अन्टार्कटिकामा २० किलोमिटर लामो दरार, वैज्ञानिकले भने: संसार नै खतरामा ! - Sidha News
अन्टार्कटिकामा २० किलोमिटर लामो दरार, वैज्ञानिकले भने: संसार नै खतरामा !
एजेन्सी । अन्टार्कटिकामा २० किलोमिटर लामो दरार परेको छ । वैज्ञानिकहरुले यसलाई संसारभरकै लागि खतराको संकेतको रुपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आइसवर्गमा ठूलो दरार आएको छ ।
युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सीको उपग्रहले तस्बिर लिएको छ । अन्टार्कटिकामा दुई ठूला दरार देखिएको र ती २० किलोमिटर भन्दा धेरै क्षेत्रमा फैलिएको एजेन्सीले जनाएको छ । पश्चिम अन्टार्कटिकामा जमेको हिउँ पछिल्लो २५ वर्षमा पग्लीदै गएको छ ।
वैज्ञानिकहरुले दरारअनुसार नयाँ हिमखण्ड निर्माण हुनसक्ने बताएका छन् । सन् १९९२, १९९५,२००१, २००७, २०१३, २०१५, २०१७, र सन् २०१८मा आएको आपत्ति भन्दा ठूलो समस्या आउँनसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
समुद्रसँग जोडिएका देशमा नयाँ खालको समस्या तिब्र गतिमा आउन सक्ने छ । माल्दिभ्स जस्ता देशका लागि यस्तो समस्या बिकराल बन्ने अनुमान गरिएको छ । यसले नेपालजस्ता हिमालय रेञ्जका क्षेत्रमा पनि प्राकृतिक विपत्ति ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।